PressReader - Ilanga: 2018-02-08 - Bamangalele uKhozi abalandeli bakamaskandi
Bamangalele uKhozi abalandeli bakamaskandi
Bafuna izimpendulo ngokungaqokwa kwezesintu
Ilanga - 2018-02-08 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE
ABENEME abalandeli bakamaskandi asebeqome ukumangalela uKhozi FM kwi-Independent Communications Authority of South Africa (Icasa), belusola ngokubaleka neqiniso mayelana nokungaqokwa kwengoma kamasikandi nyakenye ezingomeni ebezibanga ukuhlukanisa unyaka.
Izinduna zamaqembu amakhulu kumasikandi zitshele ILANGA ukuthi sezibike kwabakhulu ngesenzo soKhozi FM sokubaleka uma zicela umhlangano nalo ngenhloso yokucaciseleka ngokwenzekile.
UMnu Phiwayinkosi Khanyile - oyinduna yabalandeli bakaKhuzani "Ndlamlenze" Mpungose kodwa othe kulolu daba akakhulumi njengenduna yabalandeli balo mculi - uthi emuva kwezinsuku ezimbili kumenyezelwe uhlu lwezingoma eziqokiwe, bahlanganile beyizinduna zawo wonke amaqembu babhalela izikhulu zoKhozi bacela umhlangano kodwa bazitshwa.
Uthi badlulisele isikhalazo sabo kwiSouth African Broadcasting Corporation (SABC) eGoli nakhona kabayitholanga impendulo.
"Sishaya amakhala ngokungaqokwa ngisho kweyodwa ingoma kamasikandi (kwezili-10 ebezincintisana) ngoba silulandele uhlelo lokuvota obelubekiwe futhi siyakholwa wukuthi sibaningi kakhulu esithanda umasikandi. Besingeke sihlulwe ngamavoti okuqoka umculi kamasikandi. Sisola isandla semfene kule nto,” kusho uMnu Khanyile.
Kuzokhumbuleka ukuthi kube khona ukungenami okukhulu kubalandeli bomculo wesintu ngokushiywa ngaphandle kwalo mculo ngendlela engaqondakali ngesikhathi kunezinhlelo zokuqokwa kwezingoma ezizohlukanisa unyaka.
Ngemuva kokuxoxa kwezinhlaka ezahlukene zabalandeli ngalolu daba, abaholi babalandeli bajutshwe ukuba bacele umhlangano ophuthumayo nezikhulu zoKhozi.
Lolu hlaka luthi luyibhalile incwadi lwacela umhlangano zingakapheli izinsuku eziyisi-7 kepha kaluzange luyithole impendulo kubaphathi balo msakazo.
UMnu Khanyile uthi kunqunywe ukuba udaba ludluliselwe kwezinye izinhlaka ezengamele izikhungo zokusakazela umphakathi eNingizimu Afrika. Kube sekufakwa isimangalo esisemthethweni kwiBroadcasting Complains Commission of South Africa (BCCSA) yona yasidlulisela kwi-Icasa.
Okufunwa ngabalandeli bakamasikandi yincazelo mayelana nendlela okuqokwe ngayo izingoma njengoba kunobufakazi bokuthi nabo bakwenze konke ukulandela lolu hlelo.
Bacele i-Icasa ukuba iphoqe umsakazo ukuba uveze ubufakazi bokuthi umasikandi uhlulekile wukuba nezibalo ezanele zabaculi noma izingoma ebezingangena ohlwini lwengoma ezohlukanisa unyaka.
UMnu Ongkarabile Mofokeng we-Icasa uthi sebejube uphenyo lwabo ngalesi sikhalo, uma seluphothuliwe bazokwaziswa abafake isimangalo.
Ihhovisi likaMnu Kaizer Kganyago, okhulumela iSABC, lithi lisalindele ukuthola kabanzi oKhozini ngalesi sikhalo.